merolagani - चर्चामा निसान आरिया इलेक्ट्रिक एसयुभि, नेपालमा कहिले आउला ?
चर्चामा निसान आरिया इलेक्ट्रिक एसयुभि, नेपालमा कहिले आउला ?
May 21, 2022 05:02 PM Merolagani
विद्युतिय गाडी भित्र्याउने लहर चलिरहेको बेला नेपालमा अर्को इलेक्ट्रिक एसयुभि गाडी आउने भएको छ ।
बोल्ड डिजाइन, आकर्षक लुक्स र उत्कृष्ट फिचर सहित केहि समय अघि भारतीय बजारमा आएको निसान आरिया एसयुभि नेपाली बजारमा पनि आउने पक्का भएको छ । यसअघि नै नेपालमा निसानले ल्याएको निसान लिफले राम्रो रेस्पोन्स पाएको थियो ।
नेपाली बजारमा अब आउने गाडी निशानका लागि दोस्रो विद्युतिय गाडी हो । इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु मध्ये लोकप्रिय रहेको निशान ब्रान्ड नेपालमा निशान गाडी पायोनियर मोर्टर्सले बिक्री बितरण गर्दै आएको छ ।
विद्युतिय सवारी भित्र्याउन लामो समयदेखि लागिरहेको पायोनियर मोर्टर्सले आफ्नो दोस्रो इभि आरियालाई २०२२को अन्तिमसम्म नेपालमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
कस्तो छ निशान आरिया एसयुभि ?
सरकारले गत महिनादेखि विलासिता भन्दै इन्धनबाट चल्ने सबै गाडीलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपनि विद्युतिय गाडी आयात भने खुला राखेको थियो ।
आयात नरोकिएपनि बिवाईडि, टाटा, निशानले पनि केहि समय भित्रै नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
नेपाली बजारमा आउने निशान आरिया एसयुभि झट्ट हेर्दा स्पोर्टि लुक्समा देखिन्छ । बोल्ड डिजाइन र स्पोर्टि लुक्सले यो गाडीलाई आकर्षक बनाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा निशान आरिया दुई भेरियन्ट २ डब्ल्यु डि र ए डब्ल्यु डिमा सार्वजनिक भएका छन् ।
जसमा ६३ किलोवाट आवर र लङ रेन्ज भेरियन्टमा ८७ किलोवाट आवर क्षमताको व्याट्री दिएको छ जसले ४८२ भन्दा बढी माइलसम्मको रेन्ज प्रदान गर्छ । त्यस्तै २१५ हर्सपावर (एचपी) इन्जिन पावरमा ३ सय एनएम टर्क जेनेरेट गर्दछ ।
निशानले ल्याएको यो गाडीमाअल ह्विल र फ्रन्ट ह्विल ड्राइभ अप्सनमा उपलब्ध छ । अटोनेमश ड्राइभिङ सिस्टम उपलब्ध गराइएको यो कारलाई नयाँ डिजाइनका साथ बजारमा उपलब्ध गराएको छ ।
इको, स्ट्यान्डर्ड र स्पोर्टस गरी कुल ३ मोडमा चलाउन सकिने निशन आरिया ड्राइभर इन्फर्मेसन सिस्टम र इन्फोटेन्मेन्टका लागि यसमा १२.३ इन्चको दुईवटा डिस्प्ले उपलब्ध गराइएको छ ।
२१५ हर्सपावर (एचपी) इन्जिन पावर, डबल डिक्स, एलइडि लाइट्स, डिजिटल डिस्प्लेका साथ ड्यासबोर्ड, फराकिलो इन्टेरियर स्पेसलगायतका फिचर उपलब्ध छन् ।
इलेक्ट्रिक सेग्मेन्टमै उत्कृष्ट पर्फमेन्स दिने दिने गाडी कम्पनीको दाबी छ । हालसम्म नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुने मिति नतोकिएपनि २०२२ भित्रै नेपाली बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा निशन आरियाको सुरुवाती मूल्य ४० हजार तोकिएको छ । मूल्यको बिषयमा पनि कम्पनीले औपचारीक रुपमा नबोले पनि नेपाली बजारमा निशान आरिया आइपुग्दा ५५ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ ।